Kobo Elipsa, ဖိုလီယိုအရွယ် eReader အသစ် | eReaders အားလုံး
Kobo သည်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်ဟုရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာစွာသိရှိခဲ့ရသည်။ Book Day နေ့စွဲနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပုံမှန်လုပ်ခဲ့သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အရောင်မျက်နှာပြင်ပါသည့်ကိရိယာများကိုမကြာသေးမီကမှဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဈေးကွက်တွင်ရောင်းဝယ်သူကြီးများ၏လက်မှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ Amazon နှင့် Kobo ဖြစ်သည်။ အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ကြပြီး၊ Kobo မှထုတ်ကုန်သစ်တစ်ခုစတင်ခြင်း စာအုပ်နေ့အဘို့။
ဒါပေမယ့်ဒီပစ္စည်းမှာအခြားနှောင့်နှေးမှုရှိပုံရတယ် Kobo Elipsa ကိုသိကျွမ်းလာပါ။ ဤကိရိယာသည်သမားရိုးကျ eReader နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသည်၊ ဒီဂျစ်တယ်မှတ်စုစာအုပ်လိုပဲ.
Kobo Elipsa သည်၎င်း၏အရွယ်အစားကြီးမားပြီးအရွယ်အစားကြီးသည့်အတွက်ထူးခြားသည် ၎င်း၏ 10,3 "မျက်နှာပြင် အရာ, သင်ကောင်းစွာသိသည်အတိုင်း, eReader စျေးကွက်အတွက်စံမဟုတ်ပါဘူး။ အရွယ်အစားသည်ဖိုလီယိုနှင့်၎င်းနည်းပညာအသုံးပြုသည် ဒီမျက်နှာပြင်သည် E-Ink Letter 1200 ဖြစ်ပြီး 227 ppi resolution ရှိသည်.
Kobo Elipsa ကိုအကာအကွယ်အိတ်၊
Kobo Elipsa သည် Kobo Rakuten ကိုအဆုံးစားသုံးသူအတွက်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသာမကထုတ်ကုန်လည်းရှိသောကုမ္ပဏီများတွင်ပါ ၀ င်စေသည် စီးပွားရေးကမ္ဘာအဘို့ (သူတို့ကပို။ ပို။ ဝင်နေကြသည်ပုံရသည်ရသောစျေးကွက်) ။ ထို့ကြောင့်ဤကိရိယာသည် ၀ ိညာဉ်ကိုစုဆောင်းလိုသည် SonyDPT-S1 သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်စုစာအုပ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောအရာများရှိစေရန်၎င်းကို Kobo အတွေးအခေါ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
Kobo Elipsa တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲဖြန့်ဝေလိမ့်မည် Kobo Stylus နှင့်ကိရိယာအတွက် Sleepcover နှင့်အတူ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင် ebooks (သို့) pdf ဖိုင်များကိုဖတ်နိုင်ရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့တွင်မှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုလည်းပါလာလိမ့်မည်။
ငါတံတိုင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နာမကိုအမှီရရှိသောအချက်ကိုအားဖြင့်ငါသဘောကျမိပါတယ်။ ပြီးတော့ Kobo Stylus (ဒါကခဲတံလို့ခေါ်တယ်) ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်စုများကိုရေးနှင့်ဒီဂျစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည့်သတင်းအချက်အလက်မှမည်သည့်အရာကမှကျွန်ုပ်တို့ Kobo Elipsa ကိုရေးသားရန်မလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အမှားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Kobo Elipsa နှင့်၎င်း၏ Kobo Stylus ကိုအသုံးပြုသည် Myscript နည်းပညာ လက်ရေးစာလုံးများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသင်၏ Notebooks ကိုသင်၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အသစ်တွင်သိမ်းဆည်းရန်။
Kobo Elipsa အတွက် Kobo software update ကိုပြုလုပ်သည် Dobo Box ဝန်ဆောင်မှုကို Kobo ကိရိယာများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်စုများ၊ မျဉ်းကြောင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှရယူလိုသောအခြားဖိုင်များကိုသိမ်းရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ ebooks အတွက် Dropbox ဝန်ဆောင်မှုကိုအရန်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။
Kobo သည် USB-C ထုတ်ကုန်များစတင်ထုတ်လွှင့်သည်
ကိရိယာ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အားဖြင့်ပေးထားသည် ၃၅၀၀ mAh ဘက်ထရီထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများအတွက်လက်ခံနိုင်သောပမာဏသည်မျက်နှာပြင်သည် ၁၀.၃” ဖြစ်ကြောင်းသတိရရမည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလေ့ရှိသည့်ဤကိရိယာတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။
Processor ကတော့ 1,8 Ghz နဲ့ quadcore ပါ။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှမသိသောကြောင့်၎င်းသည် Freescale ပရိုဆက်ဆာမဖြစ်နိုင်ပါ။
အဆိုပါ display ကိုအသုံးပြုသည် Kobo ComfortLight နည်းပညာကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကိရိယာနှင့်ကွဲပြားသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုပြင်ရန်ကူညီမည့်အရာ အခြားကိရိယာများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဘက်ထရီအားသွင်းရန်အတွက် USB-C port ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ Wifi + bluetooth module သည် Kobo Elipsa အားကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်စေသည်။
Kobo Elipsa ၏ဒီဇိုင်းသည်ကျွန်ုပ်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်ဒယ်များစွာအတွက်ကနေဒါကုမ္ပဏီသည်၎င်းစာအုပ်၏လက်များဖြင့်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်သည့်အခါစာအုပ်၌ရှိသည့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ခြံကိုအတုခိုးသည်။ သို့သော် Kobo Elipsa နှင့်အတူဒီဇိုင်းကိုဆက်လက်မပြုလုပ်ရ၊ Kobo Aura OneKobo သုံးစွဲသူများအလွန်အမင်းတောင်းဆိုခဲ့သောပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်မော်ဒယ်ကိုတစ်ပတ်ရစ်ဈေးကွက်တွင်ရောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒီစက်၏စျေးနှုန်းကနည်းနည်းမြင့်ပေမယ့်စျေးမကြီးဘူး။ Kobo Elipsa ကိုယနေ့ မှစ၍ စတင်နိုင်ပါသည် ၎င်းကိုဇွန် ၂၄ ရက်မှ ၃၉၉.၉၀ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ထိုအခါငါပြောစျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်စျေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစျေးနှုန်းမှာသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိပ်စက်ခြင်းအဖုံးနှင့်ဘောပင်ရှိသည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ အကယ်၍ အမှုနှင့်ဈေးနှုန်းကိုနုတ်ပါက Kobo Elipsa ၏စျေးသည်အခြားစက်များထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။ အဆိုပါ Kindle အိုအေစစ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က 10,3 "မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ eReader အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲမှာဒီစက်မှာမရှိသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်နည်းပညာအချက်အလက်စာရွက်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် Kobo အာမခံချက်ကြောင့် Kobo Elipsa ဟာဒီဂျစ်တယ်မှတ်စုစာအုပ်လောက်သာမဟုတ်ပါebooks ကိုနှစ်သက်သောကုမ္ပဏီများသာမကကုမ္ပဏီများပါထည့်သွင်းစဉ်းစားမည့်ကိရိယာတစ်ခု။ သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့ဒီစက်ကိုစမ်းရသေးတယ် ကြည့်ကောင်းတယ်၊ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » ဖိုလီယိုအရွယ် eReader အသစ် Kobo Elipsa
Kobo Elipsa, ယခုမှတ်စုစာအုပ်ပါ ၀ င်သည့် hybrid e-reader